Global Voices teny Malagasy » Ejipta: Figadrana Mandra-maty Ho An’i Mubarak · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Jona 2012 3:50 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Revolisiona ao Ejipta 2011 .
Niandry daholo izao tontolo izao satria nitsara nanameloka ny Filoha Ejiptiana teo aloha Hosni Mubarak sy ny Minisitry ny Atitaniny Habib Al Adly higadra mandra-pahafaty ny fitsarana Ejiptiana iray, noho ny andraikitra notanan-dry zareo tamin'ny famonoana mpanao fihetsiketsehana. Nandalo dingana in-49 ilay fitsarana, 250 ora ary tatitra misy pejy 60.000, hoy i Sultan Al Qassemi nibitsika , nitanisa ny voalazan'ilay mpitsara Ahmed Refaat.
@Sandmonkey : Ny fitsarana an'i Mubarak #Mubaraktrial dia nifarana taminù didm-pitsarana mahamenatra : Izy ny sy Minisitry ny Atitaniny dia samy nahazo sazy famonjàna mandra-maty izay mbola azo alefahana ara-pitsarana, afaka ny sisa rehetra.
@Sandmonkey : Ireo olona ireo ihany izay namono sy nampijaly ny ejiptiana no afaka miverina an-kalalahana amin'ny asany ankehitriny ao amin'ny MOI (Ministeran'ny Atitany). Mba saintsaino anie izany e #Mubaraktrial
@Gsquare86 : Vaky ny korontana tao anatin'ny efitrano fitsarana ary ny hiakiaka hoe “angatahan'ny vahoaka ny fahaleovantenan'ny fitsarana” “Hosoka!” #MubarakTrial
@Gsquare86 : Tsy azoko mihitsy hoe nahoana Aldy, filoha mitarika ny MOI, no voaheloka nefa tsy misy ireo polisy, na ireo manodidina azy voaheloka na tamin'inona na tamin'inona?!!!! #MubarakTrial
@Beltrew : Ny fitazonana am-ponja mandra-maty ho an'i #Mubarak idia tsy ratsy araka izay iheverana azy. Manana zaridaina izy, dobo filomanosana ary & toerana fipetrahana fiaramanidina. http://uk.reuters.com/article/2012/06/01/uk-egypt-trial-mubarak-idUKBRE85017O20120601 #MubarakTrial
@ptombola : #Mubarak‬ & Adly dia samy nampangaina ho tsy nanao na inona na inona hisorohana ny famonoana olona, fa tsy noho ny fanomezany baiko ho azy ireny. Fahasamihafana goavana & ary tsy mampahazo aina na iza na iza. ‪#Egypt‬ ‪#Mubaraktrial
@minazekri : Tiako ny mampahatsiahy anareo fa ity didim-pitsarana ity dia didim-pitsarana voalohany, ary tokony hiandry ny fampakarana didy isika aorian'ny fampakaran'ny voampanga izany eny amin'ny fitsarana mpandrava didy
Asteris Masouras dia manaraka ny fanehoan-kevitr'ireo mpiondana aterineto ao amin'ny Twitter ato . Ary eto  i Rayna St. no manangona ireo fanehoan-kevitra hafa any amin'ny Storify . Noon Arabia koa dia mizara fanehoan-kevitra eto .
Ho anà fanehoan-kevitra misimisy kokoa, zahao ny tenifototra #Mubaraktrial  ao amin'ny Twitter.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/06/04/33882/
 Revolisiona ao Ejipta 2011: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/2011-special-coverage/egypt-protests-2011/